त्यो रात – जसले मेरो कोख भरिदियो र उसलाई मैले भगवान माने… सबैले एकपटक पढ्नै पर्ने – Gazabkonews
बिहे गरेको दस वर्ष नाघिसक्ता पनि उत्तराको कोख भरिएको थिएन । अब त घरपरिवार सबैले उत्तरालाई बाँझी भनेर उनकै मुखेञ्जी भन्न मात्र बाँकी थियो । तर शिक्षित र अर्थउपार्जनमा संलग्न अनि सम्पन्न माइतीका कारण उत्तराले धैर्य त्यागेकी थिइनन् । दुई वर्षअघि दिल्ली पुगेर पतिपत्नी दुबैको सम्पूर्ण मेडिकल जाँच पनि उत्तराकै पहलमा भइसकेको थियो । उक्त जाँचमा उमङ्गको विर्यमा फर्टिलिटिको अङ्श पर्याप्त नभएको नतिजा निस्केको थियो ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,
१। के तपाईं सन्तानहिन हुनुहुन्छ रु उत्तरको ठाँउमा हो होइन लेखिएको थियो । उनले हो मा चिनो लगाइन् ।२। के तपाईं पैंतिस वर्ष नाघ्नु भएको छैन र उत्तरको ठाँउमा छ छैन लेखिएको थियो । उनले छैन मा चिनो लगाइन् ।३।के तपाई विज्ञानसम्मत रुपले आमा बन्नका लागि योग्य हुनुहुन्छ ? अर्थात् तपाईंको मेडिकल जाँच भइसकेको छ ? उत्तरका ठाँउमा छ छैन लेखिएको थियो । उनले छ मा चिनो लगाइन् । कृपया अर्को पानामा जानुहोस् लेखिएको ठाँउमा उत्तराले क्लिक गरिन् । तपाईं नछुने भएको कति दिन भयो र त्यहाँ कर्शरले तानेर अंक राख्नु पर्ने थियो । उत्तराले सातको अंक राखी दिइन् । त्यसपानामा त्यही एउटामात्र प्रश्न लेखिएको थियो र अर्को पानामा जाने चिन्ह थियो। कथा/इन्दिरा प्रसाईं
विबाहपछि काठमाडौँ फर्किए रमेश र नन्दा, विमानस्थलमा नै गरियो भब्य स्वागत
काठमाडौँ । धाराप्रवाह रुपमा तथ्य सहित बोल्न सक्ने क्षमताका धनी ब्यक्तित्व रमेश प्रसाईको पछिल्लो परिचय हो गायक । रिगंकेबुगंको राँगो गाए लगत्तै विबाह गरेका रमेश अहिले ट्रेण्डिगंमा नै रहेका बेला रमेश र नन्दा धरानबाट काठमाडौँ फर्किएका छन् ।
रमेश र नन्दाले विबाहपछि आफन्तहरुलाई भेटघाट सकेर काठमाडौँ फर्किए लगत्तै उनीहरु नन्दाले संचालनमा ल्याएको अन्तर दृष्टि आश्रम पुगेका छन् ।
अन्तर दृष्टि आश्रममा रमेश र नन्दालाई बालबालिकाले धुधधामले स्वागत गरेका छन् । विबाहपछि काठमाडौँ आएका रमेश र नन्दासँग गरिएको यो रमाइलो कुराकानी हेर्नुहोस् भिडियोमा
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले यसअघि कर्मचारीमार्फत वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब बैंकिङ प्रणालीमार्पmत वितरण गर्ने भएको छ । कर्मचारीमार्फत वितरण गर्दा हुनसक्ने आर्थिक अनियमिततालाई रोक्दै आगामी दिनमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न नगरपालिकाले आउँदो चौमासिकदेखि लागू गरी बैंकिङ प्रणालीमार्पmत वितरण गर्ने भएको हो ।
पन्ध्र वडा रहेको यस नगरपालिकामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ज्योति विकास बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र सालपा विकास बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्झौता गरिएको नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले बताउनुभयो । नगरपालिकाले बैंकसँग सम्झौता गरेअनुसार नगरपालिकाभित्रका सबै (५१३) लक्षित वर्गले अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि तोकिएको बैंकमा अनिवार्य खाता खोल्नुपर्ने भएको छ ।